कलियुगका कुरा: भन्ने रिचार्ज दिने सर्टा १० प्रतिशत छुट
भन्ने रिचार्ज दिने सर्टा १० प्रतिशत छुट
५० लाख रुपैया बराबरको मोबाइल रिचार्ज कार्ड दिने भन्दै विज्ञापन गरेको कोक, नवलपरासीको गर्मीमा पिउँदा बिर्काँ नम्बर आयो। बिर्कामा देको निर्देशनाअन्सार नम्बर एसएमएस गरेर पठाएँ। एसएमएसाँ पठाको उपहाराँ त जोन प्लेयर सर्टाँ १० प्रतिशत छुट पो भन्छ। नवलपरासीको यो दुर्गमका ग्राहक कहाँको जोनप्लेयर स्टोरमा जानु? रिचार्ज कार्ड दिने भनेर विज्ञापन गर्ने अनि जोन प्लेयराँ छुट भन्ने? मैले एसएमएस गर्दा खर्च भाको ५ रुपैयाँ कल्ले बेहोरिदिन्छ..
दिनेश राज April 2, 2011 at 9:44 PM
ईन्टरन्यास्नल भा को फुर्ति लाको होला कम्पनीले नि :)
Sanklp April 6, 2011 at 3:18 PM
मित्र दीपक जी। तपाँइको पाँच हैन १ रूपैयाँ र ट्याक्स खर्च हुने हो। फेरी यो कोकको जिएम नै भन्‌ठान्नुहोला नि। त्यो म हैन ;) माथि लेखेको कुरो त ठीकै हो तर भर्खर खोलेको बिर्कोको नँ पनि पहिले नै पठाएको छ भन्ने म्यासेजले पो त रू‌ १ खाइदियो नि।
क्यार्ने हो त्यस्तालाई ?
सबैलाई जागरण होस। के मा पठाउँदा कति खति हुन्छ भन्ने लौ हेर्नुस यो बिबरण : hehe
Niraj Wagle April 10, 2011 at 2:14 PM
तपाईं पनि त उस्तै नि मित्र : "सित्तैमा" देख्नै नहुने, कदम कदम मा होस् गार्नुपर्च/ यो दुनिया जाली छ/